KAOMININA ANTEHIROKA : « Efa ela no nandrandrain’ny vahoaka ny tsena mora »
Tato anatin’ny herinandro vitsy izay dia nidangana izay tsy izy ny vidin’entana ilaina amin’ny fiainana andananandro. 8 octobre 2019
Voakasik’io avokoa ny vary, ny menaka ny sira ny siramamy sy ireo maro hafa. Noho izany indrindra, nanapa-kevitra ny fitondrana izay tarihin’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina fa haverina ny Tsena mora. Ny filan-kevitry ny minisitra izay natao tamin’ny alarobia 25 septambra 2019 lasa teo moa no namaritra izany. Isan’ny misitraka feno io tsena mora io amin’izao fotoana izao ny Kaominina Antehiroka, ao amin’ny Distrikan’ Ambohidratrimo. Tao amin’ny fokontanin’Andranoro no nisantarana izany tamin’ny sabotsy lasa teo. Tonga teny an-toerana nijery akaiky ny fizaràna izany ny Kandidan’ny IRK eny an-toerana, Razakandrainy François Xavier na i Bezoro. Nambaran’ity farany fa « efa ela no nandrandrain’ny vahoaka io Tsena mora io, ka isaorana ny Filoham-pirenena nanaiky namerina izany indray. »
Tsiahivina fa ahitana ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro amin’ny vidiny tena mirary ny « Tsena Mora ». Tsy hihoatra ny 3 000 Ariary ny litatry ny menaka fihinana, tsy hihoatra ny 1 000 Ariary ny kilaon’ny vary, ary tsy hihoatra ny 2 000 Ariary ny kilaon’ny siramamy eny amin’ny Tsena mora manerana ny Nosy. Ankoatra ny Tsena mora izay efa sitrahin’ny vahoaka eny an-toerana, manana ny hetahetany manokana angatahiny amin’ny Filoham-pirenena ihany koa ny mponin’Antehiroka, raha ny nambaran’ny Kandida Bezoro.
Tafiditra ao anatin’izany ny fanomezana fampitaovana ireo mpianatra madinika any amin’ny ambaratonga fototra. « Mangataka ny tenako amin’ny maha ben’ny tanàna ahy teo aloha mba hasiana fizaràna fitaovam-pianarana ho an’ny ankizy tahaka izao amin’ny Tsena mora izao ihany koa satria tena sahirana ny Ray aman-dreny amin’ny fampidirana ny zanany », hoy ny nambarany.
Mbola nohamafisin’ity kandida ity koa ankoatra izay fa izy irery ihany no kandidan’ny IRK, nahazo tso-drano sy neken’ny kaomity eny an-toerana. Misy kandida hafa misandoka ho IRK mantsy eny an-toerana ka mampiasa ny loko volomboasary mampiavaka ny IRK.